» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १०
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १०
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार १३:०६
मकवानपुर, २७ चैत । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चामा छ । नेपालकै ठूलो भनेर दाबी गरिएको सिंगिङ रियालिटी शोको चितवन अडिसनबाट केही प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका छन् । यस भिडियो सिरिजको दशौँ भागमा चितवन अडिसनबाट छानिएका थप ३ जना प्रतियोगीहरु एलिना गुरुङ, श्रीया नेपाल र विजय भण्डारीका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
६) विजय भण्डारी– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि चितवनबाट छानिएका छैटौँ प्रतियोगी हुन् विजय भण्डारी । यस अघि नेपाल आईडलको सिजन ३ मा पनि सहभागी भएका विजयका केही गीतहरु समेत सार्वजनिक भईसकेका छन् । उनले अडिसनमा ‘घरको माया’ बोलको गीत गाएका थिए । निकै नै सुमधुर आवाजमा गीत गाएका विजय सोही गीतबाट दोस्रो चरणका लागि छानिएका हुन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा पहिलो नेपाल स्टार को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।